Isinqumo sokuthi ingane ingomunye wabaluleke kakhulu kumbhangqwana oshadile. Izinto eziningi zithonya isifiso somuntu ukwakha umndeni futhi ube nezingane. Isifiso sokuba abazali sivame ukuhambisana nokuqala kwesigaba esibalulekile ebuhlotsheni babalingani.
Ngokungazi kahle noma ngokuqaphela, kwabesilisa nabesifazane abaningi, izingane ziwumgomo oyinhloko empilweni. Njengoba kunikezwe ukutholakala kwamaphilisi okusebenzayo okwamanje, imibhangqwana, njenganini ngaphambili, inethuba lokuhlela umndeni. Bangakhetha isikhathi sokuzalwa kwezingane, inombolo yabo, kanye nesikhathi esiphakathi kokuzalwa komunye wabo. Abashadile banganquma ngisho nokuba nezingane. Naphezu kwalokhu, ukuzalwa kwengane ngokuvamile akuhlelwe kuhle. Uhlela ukuba nengane kangakanani nokuthi ungayenza kanjani kahle?
Isinqumo sokuba nezingane
Wonke umuntu unesifiso semvelo sokuba nezingane ngandlela-thile. Ngokuvamile into yokuqala ukuthi imibhangqwana esemisha efuna ukudala umndeni ixoxwe ukuthi ingabe kufanele ibe nengane. Abanye bafuna ukwenza lokhu ngenkathi bebancane futhi bephilile, kodwa abanakho ukuzinza kwezezimali, kanti abanye banquma ukulinda baze bakhule futhi bacebile, kodwa mhlawumbe bangasebenzi kancane.
Emva kokuvela kwengane yokuqala, imibhangqwana ivame ukukhetha ukuthi ifuna izingane eziningi futhi emva kwesikhathi esithile. Esinye sezizathu zokukhulisa isikhala phakathi kokuzalwa kwezingane yisidingo sokubuyisela umzimba wesifazane emva kokubeletha. Ezinye imibhangqwana inquma ukuzala ingane eyodwa kuphela. Mhlawumbe, labo abashadile bakholelwa ukuthi bazokwazi ukuzinikela isikhathi esiningi, noma abanakho izingane ngenxa yezizathu zezokwelapha kanye nesimo sempilo.
Kukhona umbono wokuthi ingane kuphela emndenini ivame ukuphazamiseka, futhi ukulungiswa okuhle komuntu omdala kuyilungu lomndeni omkhulu. Abafowethu nodadewethu abadala bangathonya kakhulu ukuthuthukiswa okungokomoya nentando yenhlalakahle yengane, kodwa imiphumela yezifundo ezithile ibonisa ukuthi izingane ezivela emindenini emikhulu azikwazi ukuya esikoleni. Ngokuvamile, ubulili bomntwana wesibili yisici esinqumayo sabantu abashadile ngokuphathelene nenani labantwana. Abanye bafuna ukuba bobabili abafana namantombazane emndenini, futhi baqhubeke bebeletha izingane ezifanayo zobulili obufanayo kuze kube yilapho kuzalwa umntwana wobulili obuhlukile. Inani lezingane emndenini lithinteka yizici ezifana nezinga lemfundo yabazali nesimo sezenhlalo nezomnotho. Ngaphezu kwalokho, njengamanje udlala indima yokuqothula omama asebekhulile ngokweqile, okuyinto evame kakhulu.
Ukuphikisana phakathi kwabazalwane nodadewethu
Izazi zengqondo ziye zaveza izinhlobo eziningana zokuphikisana phakathi kwabazalwane nodade. Kwakukhona ukuthi kwanda ngokunciphisa eminyakeni yobudala. Umzalwane osekhulile noma udadewabo, ongugunya, angakhonza njengesibonelo sokulingisa. Uma izingane zinezimo zengxabano, ingane ekhulile ingase ibhekane nokuphikiswa okuvulekile kusuka komncane.
Abazali bathola ukuthi manje baphoqeleka ukuba banikeze izidingo zengane. Uma behlela ukuhamba, baqale bathathe isinqumo sokuthi ngubani ozoyibheka ingane. Bangakwazi futhi ukukhathala ngemithwalo yemfanelo yokunakekela ingane futhi bazizwe becindezelekile ngenxa yobunzima bezezimali obuye bavela. Ekuqaleni, abaningi bakholelwa ukuthi isimo sabazali siyobe sinciphise amathuba abo. Ngokuvamile, imibhangqwana esemisha ifuna ukuchitha isikhathi esithile ukuziphilela yona futhi ihlolisise ubuhlobo bayo. Kodwa-ke, njengomthetho, inkinga yokuba nezingane kuyindaba nje yokukhetha isikhathi esithile salokhu. Ngesinye isikhathi sokuphila kubantu abasha lokhu kungafaniswa nokuboshwa ejele, ngakolunye uhlangothi - kubonakala kungesabeki kakhulu.
Ukukhulelwa okuvela endaweni yokubukeka yendalo kuyinto isimo semvelo ngokuphelele. Ubudala bomzimba wesifazane bukhawulelwe isikhathi kusukela ekuqaleni kokuya esikhathini ukuya esikhathini sokuya esikhathini. Ikhono lokugwema ukuzalwa kwezingane ezinkathini ezibucayi (okuncane kakhulu noma sekwephuzile kakhulu) kunganciphisa ingozi engaba khona kokubili umama nomntwana. Abesifazane abaneminyaka engama-35 kuya ku-40 bayaqaphela ukuthi banesikhathi esincane sokubeletha ingane yabo. Owesifazane, ngokusheshisa ukunyusa izinga lezemisebenzi, khetha isikhathi sokuzalwa kwengane kunzima kakhulu. Abaningi bathola ukuthi abanaso isikhathi sokwakha umndeni. Abanye babo bakholelwa ukuthi ukuphumula emsebenzini ngesikhathi esibalulekile sokukhula komsebenzi kunganciphisa amathuba abo esikhathini esizayo ukuba baphakanyiswe ngaphezu kwezinga elithile emisebenzini yabo ekhethiwe. Lokhu kungabangela ukungqubuzana nomlingani - amadoda akwazi ukukhiqiza izingane kuzo zonke izimpilo zabo futhi abaqondi abesifazane abazwa umzuzu olahlekile. Kodwa-ke, isisombululo sokwehlisa isingeniso sitholakala ngaso sonke isikhathi.
Isinqumo sokungabi nabantwana
Isinqumo sokungabi nabantwana singase sibe ngenxa yokwesaba umthwalo wemfanelo, isipiliyoni esidabukisayo kusukela ebuntwaneni bakho, ukwesaba ukungahambisani nemithwalo yemfanelo yabazali. Abanye abantu bakhetha ukuphishekela imisebenzi ngokuzinikezela okufanayo lapho bangazinikela khona enzalweni yabo.
Ukulungiselela ukuzalwa kwengane
Ukulungiselela ukuzalwa kwengane enempilo kufanele kuqale izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokukhulelwe. Ngokuvamile abesifazane bayanconywa ukuba:
• ukugwema ukubhema nokusebenzisa izidakamizwa;
• ukunciphisa ukusetshenziswa kotshwala;
• Ukuqala ukuthatha i-folic acid ukuze kuvinjelwe ukuthuthukiswa kwezinkinga ze-neural tube esikhathini esizayo (isb.
• hlola ukuthi umuthi wokugoma u-rubella wenza yini ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo ngesikhathi sokukhulelwa;
• khansela izisu zokubeletha ngomlomo izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokukhulelwa okufunayo.
Ukwandisa amathuba okukhulelwa, imibhangqwana iyanconywa ukuba ibe nobulili nsuku zonke esikhathini esivundile kunazo zonke zomjikelezo wesinye isikhathi. Iqala cishe izinsuku eziyisishiyagalolunye ngaphambi kokuvuthwa okulindelwe bese kuqhubeka kuze kube usuku lokuqala emva kokuvuthwa.
Ungashintsha kanjani izindiza futhi unakekele ingane
Ukuphothula iziqu ezingenakulibaleka ebangeni lesi-11: kanjani ukugubha leli holide?
Uhambo lokuqala ukuya kumgogeni wezinsizwa womfana osemusha
Indlela yokulungisa ukulungisa ishiya
Ukushayela nge-sauerkraut kanye namasoseji
Ungaqala kanjani ingxoxo nomfana onthanethi
Amaswidi e-Chocolate "Brigadeiro"
Wanikezela enhliziyweni yomuntu ...
Ungayichaza kanjani iphupho ngokuncelisa nokuncelisa ubisi?